Websaydhyada ugufiican ee fiidiyowyada looga gooyo khadka tooska ah bilaash | War gadget
Ignacio Sala | | Ciyaartoyda, Software
Imaatinka taleefannada casriga ah ee suuqa iyo teknolojiyaddu hore u martay, sida aan u qabsanno xusuusta ugu wanaagsan ee maalinteenna maanta ayaa is beddelay, dka tagista kaamirooyinka is haysta si ay ugu adeegsadaan taleefanka casriga ah labadaba sawir qaadista iyo fiidiyowyada. Sannad kasta, kamaradda taleefannada casriga ahi waxay na siisaa astaamo ka sii wanaagsan, markaa macno dambe uma samaynayso sii wadista adeegsiga kaamirooyinka isku dhafan illaa ay na siiso astaamo aynaan hadda ka helin casriga.
Kordhinta xallinta kamaradda ayaa umuuqata inaanay mudnaan sii siineyn soo saarayaasha, kuwaas oo diiradda saaraya kordhinta tayada fiidiyowyada. Laakiin haddii aan rabno inaan wadaagno fiidiyowyada, iyadoo kuxiran muddadooda, waxaa nalagu qasbi doonaa inaan jarjarno. Tan awgeed, internetka waxaan ka heli karnaa adeegyo shabakadeed oo kala duwan oo noo oggolaanaya inaan si dhaqso leh oo fudud ku qabanno. Halkan waxaan ku tusaynaa sida aad fiidiyowyada ugu jarto internetka adigoon ku rakibin wax codsi ah kombiyuutarkeena.
Sida caadiga ah noocyada adeeggan khadka tooska ah, xaaladaha badankood waxaa lagama maarmaan ah in Adobe Flash lagu rakibo kombuyuutarkeenna haddii aan dooneyno inaan adeegyadan u adeegsanno. Websaydhka kaliya ee ay tahay inaan kala soo bax noocii ugu dambeeyay ee Flash waa tan soo saareheeda, Adobe. Waa inaadan waligaa rakibin nooc ka mid ah Flash, aadna aad uga yar cusbooneysiinta degel nagu talineysa inaan sameyno taas oo sheegaysa inuu duugoobay. Flash wuxuu isku daraa nidaamka cusbooneysiinta taas ayaa na soo ogeysiin doonta marka ay lagama maarmaan tahay in la rakibo cusbooneysi cusub oo barnaamijkan ah.
1 Web si loo Yareeyo Video Online
Web si loo Yareeyo Video Online
Jar Video Online waxay na siineysaa qalab aan noo oggolaaneynin oo kaliya inaan jarjarno fiidiyowgeena si ay ugu fududaato wadaagitaankiisa, laakiin sidoo kale noo oggolaanaya u wareeji 90 illaa 270 digrii, goo qayb ka mid ah fiidiyowga si aad uga dhigto shayga fiidiyowga mid caan ah, ka yaree fiidiyowyada tooska ah ee laga helo URL ama Google Drive waana la jaan qaadi karaa inta badan qaababka hadda laga heli karo suuqa. Cabirka ugu badan ee faylka ee noo ogolaanaya inaan gooyo wuxuu gaarayaa 500 MB, qadar macquul ah waxay kuxirantahay tayada aan ku duubnay fiidiyaha.
Marka aan soo galino fiidiyowga oo aan sameyno dhammaan wax ka beddelka uu codsigu noo oggolaado, waan awoodnaa dooro tayada iyo qaabka aan dooneyno inaan ku soo dejino, si aan sidoo kale u isticmaali karno Cut Video Online si aan ugu beddelno fiidiyowyadeena qaabab kale iyada oo aan loo baahnayn in lagu rakibo wax codsiyo saddexaad ah kombiyuutarkayaga. Dabcan, waqtiga uu hawlgalkani qaadan doono waxay ku xirnaan doontaa xawaaraha isku xirka ee aan qandaraaska qaadanay.
Wareysi Kaliya maahan inay noo ogolaato inaan jarayno fiidiyowyada aan jecel nahay, laakiin sidoo kale waa adeeg sidoo kale noo oggolaanaya inaan isku shaandheynno, jarno aagga ugu xiisaha badan ee fiidiyowga, marka lagu daro noo oggolaanshaha inaan u qaybinno laba ama in ka badan fiidiyowyo . Dhibaatadu waxay tahay in dhammaan howlahaas aan ku qasbanahay inaan si madax-bannaan u qabanno oo aan u wada qabsan karin sidii aan ku qaban karnay adeegga qaybtii hore. Kaliya maahan inay noo ogolaato inaan fayl galino oo aan jarno, laakiin sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan galno URL meesha fiidiyowga aan dooneyno inaan jarno ku yaallo oo aan ku soo dejino. Adeegani uma baahna Adobe Flash inuu shaqeeyo.
VideoToolbox waa mid kale oo ka mid ah adeegyada ugu wanaagsan ee khadka tooska ah ee aan ka heli karno internetka marka ay timaaddo jarista fiidiyowyadeenna iyada oo aan la soo degsan nooc kasta oo codsi ah. Adeegani wuxuu noo ogolaanayaa inaan soo dejino fiidiyowyo gaaraya 600 MB qaababka soo socda: 3GP, AMV, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, M4V, MP4, MPEG, MPG, RM, VOB, WMV. Intaa waxaa sii dheer, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan soo saarno codka oo aan ku darno mid cusub, ku darno cinwaanno hoose, qabashada fiidiyowyada, bedelno qaabka koodhka, ku darno calaamadeyn, xallinta iyo si macquul ah u gooyno qayb kasta oo fiidiyowga ah oo aan uga tagno kaliya midka danaha leh na ugu badan.
Tifatiraha fiidiyowga ee internetka ee Kioza, adeeg sidoo kale na siiya adeeg aan ku saxno sawirrada khadka tooska ah, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan jarjarno fiidiyowyada si aan uga tagno kaliya qeybta ugu muhiimsan ee fiidiyowga, laakiin sidoo kale noo ogolaanaya ku dar kala guur qaab buug, dhaqdhaqaaq, indhooleyaal ... haddii aan ku hayno wax ka badan hal fiidiyoow tifaftiraha, waxaan sidoo kale ku dari karnaa saameyno sida rashka, bokeh, swirl, glitters ...
Waxaan sidoo kale awoodnaa kudar qoraallo, animations iyo music. Intaa waxaa dheer, iyo haddii taasi aysan ku filnayn, waxaan sidoo kale isku dari karnaa labada sawir iyo fiidiyowyo si aan u abuurno fiidiyowyo cajaa'ib leh. Hawlgalka adeeggan fiidiyowga ah ee fiidiyowga ah ee internetka ayaa ah mid aad u fudud, tan iyo markii lagu daro mid kasta oo ka mid ah saameynta kaliya waa inaan u jiidanaa qaybta fiidiyowga halka aan dooneyno inaan ku darno.
Wincreator waxay na siineysaa tifaftire fiidiyow ah oo khadka tooska ah ah oo aan ku jari karno qaybta fiidiyowga ah ee aan xiiseyneynin. Qaababku waxay ku habboon yihiin .wmv, mp4, mpg, avi ... Adeeggan Waxay na siinaysaa xaddidaadda 50 MB marka la jarayo fiidiyowyada, sidaa darteed waxay ku habboon tahay fiidiyowyada yaryar iyo haddii aynaan ugu talo gelin inaan ku darno saameyn kale, rogno ama gooyo aag gaar ah oo fiidiyowga laga hadlayo ah. Wincreator uma baahna Adobe Flash inuu yareeyo fiidiyowyada aan jecel nahay sidoo kale.
Magisto waxay na siisaa tifaftire fiidiyow oo ka duwan sidii caadiga ahayd, maadaama ay noo ogolaaneyso fiidiyowyadayada ku saxo saddex tallaabo. Marka hore waa inaan ka xulannaa fiidiyowga darawalkeena adag ama koontadayada keydinta ee Google Drive. Tallaabada xigta waxaan ka goyn karnaa aagga ugu xiisaha badan ee fiidiyowga waxaanan ku darnaa dulucda sida ugu habboon ugu habboon waxa aan raadineyno. Tallaabada saddexaad iyo tan ugu dambeysa, waa inaan doorannaa heesaha codka ee wehelin doona fiidiyahayaga. Si ka duwan adeegyada kale, si aan u adeegsanno Magisto, waa inaan iska diiwaangelinno, ama xisaabtayada Facebook ama annaga oo adeegsanna koontadayada Gmail. Uma baahna Flash la aqbali karo inuu shaqeeyo.
cunt ClipChamp maahan oo kaliya inaan soo galin karno fiidiyow kasta oo aan tafatiri karno, laakiin sidoo kale waan sameyn karnaa wax ku duub kamaradda kambuyuutarkayaga. Marka laga hadlayo ikhtiyaarrada ay ClipChamp na siiso, waxaan u aragnaa suurtagalnimada fiidiyoowga fiidiyowga, gooynta aag shaashadda ah, wareejinta fiidiyowga, rogista ama hagaajinta heerarka dhalaalka iyo isbarbar dhiga. Sida Magisto oo kale, si aan u adeegsan karno adeeggan, waa inaan iska diiwaangelinno xisaabteenna Facebook ama Gmail, oo ah wax dib u dhici kara in ka badan hal si aan u awoodno adeeggan. Sidoo kale uma baahna Adobe Flash Player.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Sawir iyo dhawaq » Ciyaartoyda » Iska yaree fiidiyowyada internetka